Amathuluzi ama-5 Awesome Wokumaketha Okuqukethwe Ama-Minimalists | Martech Zone
Amathuluzi ama-5 Awesome we-Content Marketing Minimalists
NgoLwesibili, Januwari 23, 2018 UJessica Theifels
Ngizibheka njengomuntu omncane kwezentengiso zokuqukethwe. Angiwathandi amakhalenda ayinkimbinkimbi, amashejuli namathuluzi wokuhlela — kimi, enza inqubo ibe yinkimbinkimbi kakhulu kunendlela okudingeka ngayo. Ukungasho, benza abathengisi bokuqukethwe babe lukhuni. Uma usebenzisa ithuluzi lokuhlela ikhalenda lokuqukethwe lezinyanga eziyisithupha-inkampani yakho elikhokhelayo — uzizwa ubophezelekile ukunamathela kuyo yonke imininingwane yalolo hlelo. Kodwa-ke, abathengisi bokuqukethwe abahamba phambili bayashesha, bakulungele ukuhambisa okuqukethwe nxazonke njengoba amashejuli eguquka, imicimbi ivela noma kwenziwa izicelo.
Ngingumuntu omncane futhi onobuhlakani emsebenzini wami, ngakho-ke ngenkathi ngisathembele kumathuluzi ambalwa okucwaninga, ukuhlela, ukuhlela nokuningi, onke aqonde phambili futhi amahhala. Namuhla ngabelana ngezintandokazi zami ezimbalwa ukukusiza ukuthi ukhanyise umthwalo emizamweni yakho yokumaketha okuqukethwe.
Okwe: Ukuhlela Izithombe Nokudala I-Graphics
Yize kungakuhle ukufunda nokusebenzisa ithuluzi elifana ne-Adobe Photoshop ekuhleleni izithombe, anginaso isikhathi sokulifunda, noma imali yokukhokhela lokho. Ngiqale ukusebenzisa i-Photoscape X (ye-Mac kuphela; abasebenzisi beWindows abaxolayo) eminyakeni embalwa eyedlule futhi manje sengithembele kuyo kunoma yikuphi ukuhlela konke kwesithombe noma ukudala ihluzo engikwenzayo, okuyinto eningi.
Ngingenza ukuhlela okujwayelekile, kufaka phakathi ukunqampuna, ukulungisa umbala nokulungiswa, nokukhulisa usayizi. Engikusebenzisa kakhulu i-Photoscape, noma kunjalo, ngumhleli, lapho ungangeza khona umbhalo, ubujamo, imibala, nokuningi ezithombeni. Lokhu kuyasiza ekwakheni isithombe senhlalo, kepha futhi nokwengeza imicibisholo noma amabhokisi kuzithombe-skrini (njengemifanekiso kulokhu okuthunyelwe), okubalulekile lapho ubhala izingcezu zokufundisa noma ucela izinguquko zedizayini kokuqukethwe kwakho.
Ngisebenzisa i-Photoscape ukudala isithombe semidiya yezenhlalo kwelinye lamakhasimende ami futhi ungabona eminye imikhiqizo eqediwe ngezansi. (Qaphela: lelo kholaji yezithombe nalo lenziwa nge-Photoscape!)
Ithuluzi Lokuhlola Igunya Lesizinda Esibanzi
Umsebenzi wami njengomthengisi wokuqukethwe uhilela ukuhlola inani lamawebhusayithi ahlukahlukene, elinye lamamethrikhi abaluleke kakhulu yi-Domain Authority. Ngenkathi kunamathuluzi amaningi akhokhelwayo ongawasebenzisa, ngithole okungcono kakhulu, okulula futhi okunokwethenjelwa kakhulu yileli thuluzi elisekelwe kuwebhu. Umqondo ulula njengoba uzwakala: ukopisha futhi unamathisela uhlu lwamawebhusayithi, hlola amabhokisi wedatha ofuna ukuthi ithole (Isizinda Seziphathimandla, Isiphathimandla Sekhasi, Isikhundla seMoz, Ikheli le-IP), bese ulinda imiphumela ukuthi igcwale ngezansi.
Lokhu kuhle uma wenza ucwaningo lwewebhusayithi ngezinga elikhulu usebenzisa i-Google AmaSpredishithi ngoba ungakopisha futhi unamathisele ngqo kusuka kushidi uye kuthuluzi. Azikho izinyathelo ezingeziwe, akukho ukwengeza okhefana — okwenza lokho okungahle kube ngumsebenzi oyisidina, kube lula kakhulu futhi kube lula. Awudingi i-akhawunti, okusho ukuthi une-password eyodwa eyodwa okufanele uyikhumbule.
isikhumbulo sesikhana & I-Hootsuite
Okwe: Ukuhlela nokulalela komphakathi
Bengifuna ukukufaka zombili lezi ngoba njengamanje ngizisebenzisa zombili futhi ngizibona ziyimikhiqizo efanayo enamandla ahlukile. Kunamathuluzi amaningi akhokhelwayo atholakalayo, futhi ngisebenzise amaningi awo, kepha uma kukhulunywa ngamathuluzi alula, amahhala, lezi yizintandokazi zami. Nakhu engikuthandayo ngakunye:
Ukuhlela: Amandla weBuffer kubathengisi bokuqukethwe ukuthi kuhlanzekile futhi kulula ukuzulazula. Ngaphandle kwesixhumi esibonakalayo esiyinkimbinkimbi, ungabona kalula okuhleliwe nokuthi iziphi iziteshi ezingenalutho. Ama-analytics kuthuluzi lawo lamahhala mancane, kepha asabalulekile.
Yonke inhlalo: IHootsuite isebenza njengethuluzi lokulalela jikelele ngaphandle kokucindezela. Isici engisithandayo sale thuluzi ukukwazi ukwengeza imifudlana ukuqapha ukushiwo, amagama angukhiye ahlukahlukene noma imilayezo eqondile kuma-akhawunti ngamanye. Ngenkathi isebenza njengethuluzi lokuhlela elisebenza njengoba kulindelwe, ama-akhawunti wamahhala awanakho ukufinyelela kuma-analytics.
Kunezinhlelo zokusebenza eziningi zokuhlela nokwenziwa futhi kungithathe iminyaka ukuthola eyodwa yilokho ebengikade ngikufuna. Inselelo ngezinhlelo zokusebenza ezenziwayo ukuthi ziyinkimbinkimbi kangakanani — eziningi zidinga umsebenzi ngamunye ukuthi ube nosuku olufanele, ngokwesibonelo, noma usebenzise izixhumi ezibonakalayo lapho imisebenzi yakho ihlelwe khona ngosuku, okwenza kube nzima ukubuka isonto lakho lonke ngasikhathi sinye.
I-TickTick yiyo yonke into ebengiyifuna nokuningi, futhi ilungele umkhangisi wokuqukethwe olawula ama-akhawunti amaningi noma amaklayenti. Nakhu okwenza kuphelele kumthengisi wokuqukethwe okuncane:
Ku-All Tab, ungabona imisebenzi yeklayenti ngalinye ngasikhathi sinye. Iklayenti ngalinye lihlala “njengohlu” lwalo, okuyilokho okubonayo ngezansi:
Ungabheka futhi uhlu ngalunye ngalunye, ngakho-ke njengoba uhamba ngosuku lwakho lomsebenzi, uyakwazi ukugxila kuklayenti elilodwa, okwenza kube lula ukuhlala emsebenzini ngaphandle kokuphazamiseka.
Isici sokuqala engisifunayo, noma kunjalo, ukukwazi ukubheka imisebenzi ohlwini. Nge-TickTick, noma yini emakiwe ohlwini ihlala ezansi, okwenza kube lula ukubika kubabambiqhaza uma kunesidingo, noma ulandelele okwenzile ngalolo suku.
Ungakusebenzisa futhi lokhu njengethuluzi lokuhlela okuqukethwe, nohlu lwenyanga ngayinye nokuqukethwe ohlela ukukwenza. Ngoba ungangeza izinsuku ezifanele, amanothi, ileveli ephambili namabhokisi wokuhlola ngaphakathi kwendawo yencazelo, uyakwazi ukuhlela imininingwane ngayinye kalula.
HARO futhi I-clearbit
Okwe: Ukuthola Imithombo
Futhi, bengifuna ukukufaka kokubili ngoba kunenhloso efanayo — kepha kwehluke kakhulu ngasikhathi sinye. I-HARO (Siza i-Reporter Out) ayilona ithuluzi elincane, futhi iyinsizakalo eningi, kepha ibaluleke kakhulu kimi njengomthengisi wokuqukethwe ngoba kulula ukuyisebenzisa. Awudingi ukudala i-akhawunti uma ungafuni, futhi zonke izimpendulo zombuzo wakho zizofika ngqo ebhokisini lakho lokungenayo — lapho osuvele uchitha khona isikhathi sakho esiningi vele. Uma udinga ukuthola imithombo ye-athikili, nansi indlela yokukwenza.
I-Clearbit ingenye indlela yokuthola imithombo, kepha ngiyisebenzisa ukuxhumana nabanikazi bewebhusayithi nabashicileli. Ihlala ebhokisini lakho lokungenayo njengesengezo, futhi ikuvumela ukuthi useshe oxhumana nabo cishe kunoma iyiphi iwebhusayithi — konke okuphakathi kwebhokisi lakho lokungenayo. Njengomthengisi wokuqukethwe ovakashela okuthunyelwe futhi ohlala exhuma nabanye abahleli nabakhangisi, ngisebenzisa leli thuluzi nsuku zonke.
I-Minimalist ayisho ukuthi ayisebenzi
Awudingi ukusebenzisa amathuluzi ayinkimbinkimbi, abizayo ngoba ayatholakala. Ngenkathi okunye kungadingeka ekuphathweni kokukhangiswa kokuqukethwe kwezinga lebhizinisi, uma ufana nami, ukuphatha amaklayenti amancane, noma usebenza enhlanganweni eyodwa nje, lokhu kuzoba yilokho okudingayo. Bahlanganise neGoogle Drayivu (AmaSpredishithi namaDokhumenti), i-Gmail namanye, futhi ungahleleka futhi uphumelele ngaphandle kokulahleka ngokuxubana kwamathuluzi anzima.
Tags: i-bufferokuhlola igunya ngobuningii-clearbitGmail-Google DriveAmaSpredishithi e-Googleumklami we-graphicSawubonai-hootsuitekwemaphutsa isithombeizithombeisithombe xucwaningouRobin guptaimithomboumkhaza
UJessica Thiefels ubhale iminyaka engaphezu kwengu-10 futhi njengamanje ungumbhali wesikhathi esigcwele, umeluleki wezokumaketha kokuqukethwe nomnikazi webhizinisi. Uboniswe kuForbes naku Business Insider kanti ubhalele iVirgin, Manta, BPlans nokuningi.
Okuthunyelwe Okufika Esikhathini Esibekiwe Ngezindlela Zokumaketha Ezinomthelela Kumahhotela
Ingabe Ukusesha Ngezwi ku-Cusp of Transforming Commerce?
Jan 31, 2018 ku-11: 38 AM
Jessica, ngiyasithanda isihloli seGunya okhulume ngaso.
Wenzani ngemuva kokuthola inani lamawebhusayithi uma ungenandaba nokwabelana?